२५ सय भाडा तिर्न नसक्दा भाडा कुडा फाल्दै घरबेटीले कोठाबाट निकाले, सडकमा धुरुधुरु रुँदै गरेको अवस्थामा भेटियो पिडित ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/२५ सय भाडा तिर्न नसक्दा भाडा कुडा फाल्दै घरबेटीले कोठाबाट निकाले, सडकमा धुरुधुरु रुँदै गरेको अवस्थामा भेटियो पिडित ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
पोखरा । करिब १५ दिन भयो नबिन गुरुङ र श्री गुरुङलाई घरबेटीले निकाल्दिएको । लकडाउनको बेला सबै घर गए, उनीहरुको घर स्याङजा रहेछ तर घर जाने पैसा पनि नभएको र त्यही बेला दुई महिनाको घरभाडा घरबेटीले मागेपछि तिर्न सकेनन् ।
महिनाको २५ सयका दरले दुई महिनाको पाँच हजार नतिरेपछि घरबेटीले घरबाट निकालेको र आफूहरु अलपत्रमा परेको नबिन गुरुङ बताउँछन् । १५ दिनसम्म उनीहरुले पृथ्वीचोक, नदीपुर लगायतका ठाउँहरुमा सडकमै मागेर पकाएर खाए ।